DAM - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: DAM
CatDV Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများပေးခဲ့သည်စနစ်များကျေနပ်မှု IBC 2015 (7.J15C) မှာမြန်နှုန်းနှင့်စကေးသည်လိုအပ်နေသောူပည်သူ
Stratford-အပေါ်သို့-Avon, ဗြိတိန်, စက်တင်ဘာ 9, 2015 - Square ကိုထောင့်ကွက်စနစ်များ (www.squarebox.com), ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM / ပေးခဲ့သည်) စနစ်များဆော့ဖ်ဝဲရေးဦးဆောင် IBC 2015 စဉ်အတွင်းမျိုးဆက်သစ်ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ array ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ် (ခန်းမ 7.J15C) ထိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုနှင့်အတူပိုင်ဆိုင်မှုသန်းပေါင်းများစွာ repurpose နှင့်မှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်အသေးစား, အလတ်စားနှင့်အကြီးစားလုပ်ငန်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်။ စတုရန်းထောင့်ကွက်စနစ်များလည်းပါလိမ့်မယ် ...
စတုရန်းထောင့်ကွက်စနစ်များ (www.squarebox.com), ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM / ပေးခဲ့သည်) စနစ်များဆော့ဖ်ဝဲရေးဦးဆောင်သည်ဟုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအရှိန်အဟုန်မြှင် IBC 2015 (ခန်းမ 7.J15C) စဉ်အတွင်းမျိုးဆက်သစ်ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ array ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ် နှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုနှင့်အတူပိုင်ဆိုင်မှုသန်းပေါင်းများစွာ repurpose နှင့်မှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်အသေးစား, အလတ်စားနှင့်အကြီးစားလုပ်ငန်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်။ စတုရန်းထောင့်ကွက်စနစ်များလည်း, တိမ်တိုက်ရန် CatDV မော်ကွန်းတိုက်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ...
THE OPENSTACK ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို AT, DIGITALFILM Tree ပုံ PROSTACK AND ဝေဖန်မှု SaaS သင်တန်းနည်းပြ Instant, ကြီးမားတဲ့ဒေတာဖိုင်လုံခြုံရေးကမ္ဘာတစ်ဝန်း ACCESS ပြ
ဗန်ကူးဗား, ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ -Guillaume Aubuchon ယနေ့ OpenStack ပြောရမှာစဉ်အတွင်းမိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေပြု Workflows ၏တန်ခိုးသရုပ်ပြခဲ့သည်။ မိတ်ဖက် HP က Heilion နှင့်အပြာရောင် Box ကိုတိမ်တိုက်နှင့်အတူ DigitalFilm သစ်ပင်သည်မိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံပြီး Workflows မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှု၏ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ခေတ်သစ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်စွာ generate ကိုဘယ်လိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ Guillaume, DigitalFilm Tree ၏ CTO အခုဆိုရင်ကမ္ဘာ့အလုနီးပါးတိုင်းအဓိကအဘို့စင်မြင့်ကြောင်း "မှတ်ချက်ပြု ...
NAB 2015 (SL5025) မှာ Adobe ကအသုံးပြုသူများသည် CatDV စျေး Enhanced ပေးခဲ့သည်ပံ့ပိုးမှု
ရိုးရှင်းတဲ့အသစ်အပေါင်းစည်းမှုကိုပိုမိုအစွမ်းထက်နှင့်အကျိုးရှိစွာအကြောင်းအရာ Square ကိုထောင့်ကွက်စနစ်များ (www.squarebox.com) မျှဝေခြင်း enable, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM / ပေးခဲ့သည်) စနစ်များဆော့ဖ်ဝဲရေးဦးဆောင်နှစ်ခုအစွမ်းထက်ရိုးရှင်းသော-ပေမယ်-ပိုမိုမြန်ဆန်ကို enable ပြုလုပ်ပေါင်းစည်းမှုနှင့် ပို. ပင်ဖွယ်ရှိ NAB 2015, 13-16 ဧပြီလလာ့စ်ဗီးကာလအတွင်းဗီဒီယိုကို real-time ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပလက်ဖောင်းများအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆို CatDV နှင့်Adobe® Premiere Pro ကို CC ကိုအယ်ဒီတာအဖွဲ့ software နှင့် Adobe ကများအကြားထိရောက်သောအကြောင်းအရာခွဲဝေမှု, ...
NAB 2015 (SL5025) မှာ CatDV Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများပေးခဲ့သည်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို Launch
စတုရန်းထောင့်ကွက်စနစ်များ (www.squarebox.com), ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM / ပေးခဲ့သည်) စနစ်များဆော့ဖ်ဝဲရေးဦးဆောင်, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၏တန်ခိုးကိုထပ်တိုးကြောင်း NAB 2015 (ပြခန်း #SL5025) စဉ်အတွင်းမျိုးဆက်သစ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုခင်းကျင်းပြပါလိမ့်မယ် အသေးစားအလတ်စားနှင့်အကြီးစားလုပ်ငန်းများအဘို့, To-သုံးစွဲရလွယ်ကူပြီးယှဉ်ပြိုင်ချိုကျန်ရှိသောနေတုန်း။ စတုရန်းထောင့်ကွက်ကိုလည်း CatDV Professional ကန်ဆောင်မှုများ, မူတည်ပြီးမှဖောက်သည်များဖွင့်နေတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကစစ်ဆင်ရေးကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ် ...
CatDV $ 1m ပေးခဲ့သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကယ်တင်တတ်၏, ဒါပေမယ့်ပုံစံနဲ့စျေးနှုန်း Square ကိုထောင့်ကွက်စနစ်များ (www.squarebox.com) မပါဘဲ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ (DAM / ပေးခဲ့သည်) စနစ်များကိုဦးဆောင်, Multi, အကြီးစားမှာယင်း၏ CatDV ပေးခဲ့သည်စနစ်များကိုပစ်မှတ်ထားပါလိမ့်မယ် တဲ #SL2015 မှာ NAB 5025 စဉ်အတွင်း -national လုပ်ငန်းများ။ 14 နှစ်အတွင်းစတင်ကတည်းကလွန်ခဲ့တဲ့ CatDV ရဲ့ features တွေအဆင့်မြင့်ပေးခဲ့သည်အလိုအလျောက်တစ်သဟဇာတချိန်ခွင်လျှာပတ်ဝိုင်းမှရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်ကြပါပြီ ...